बडिगार्ड आवश्यकता कि शोअप ?
मनिष अन्जान, काठमाण्डौ, 2017/09/12
कुनै कार्यक्रममा उपस्थित हुँदा बडिगार्डसहित पुग्ने कलाकारको भिड विस्तारै बढ्दो छ । पहिलो पटक नायक अनमोल केसीले 'ड्रिम्स' रिलिजको समयमा दर्शक भेट्न हल-हलमा बडिगार्डसहित पुगेपछि अहिले यो अन्य कलाकारहरुले पनि फलो गरेको देख्न सकिन्छ । कतिका लागि यो आवश्यकता र शोअप दुवै बनिरहेको छ । आफ्नो फिल्म रिलिजको बखत बडिगार्डसहित कलाकार हल पुग्नु अनौठो होइन । सिनेमा घरहरुमा पर्दाका कलाकार आँखै अगाडि देख्दा दर्शकहरुको भिड एकाएक लाग्ने गर्छ र त्यो भिडबाट सुरक्षाका लागि कलाकारलाई बडिगार्ड आवश्यक पर्छ ।
केहीदिन अगाडि नायक सलिनमान बनियाँ, नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह र नायक सलोन बस्नेत फिल्म 'ए मेरो हजुर २' प्रदर्शनको दोस्रो दिन शनिवार हलमा बडिगार्डसहित पुगेका थिए । ६ जना बडिगार्डले समेत उनीहरुलाई दर्शकबाट जोगाउन हम्मे-हम्मे परेको थियो । हलमा मात्र होइन 'ए मेरो हजुर २' टिमले प्रिमियरमा पनि कलाकारका लागि बडिगार्ड उपलब्ध गराएको थियो । फिल्मको हाइप र कलाकारको क्रेजका कारण फिल्म निर्माण टिमले प्रिमियर र हलमा दर्शक भेट्न जाँदा कलाकारका लागि बडिगार्ड उपलब्ध गराउने गर्छ ।
तर, मंगलवार निकै अनौठो घट्नाको साक्षी बने रंग पत्रकार । पाँच तारे होटल अन्नपूर्णमा फिल्म 'लिलिविली'को औपचारिक निर्माण घोषणा कार्यक्रम थियो । फिल्ममा नायक प्रदीप खड्का र नव-नायिकाद्धय जसिता गुरुङ र रेविका गुरुङ मुख्य भूमिकामा छन् । कार्यक्रम सञ्चालक नरेश भट्टराईले जब नायिकाको परिचय दिए तब जसिता र रेविका पालैपिलो दुई-दुई बडिगार्डसहित स्टेज उक्लिए । त्यसपछि फिल्मका मुख्य नायकको रुपमा नरेश भट्टराईले प्रदीप खड्काको नाम उद्घोष गरे । प्रदीपको इन्ट्री दुई नायिकाको भन्दा वजनदार थियो । उनको साथमा चार बडिगार्ड थिए ।
हेर्दा यो दृश्य गज्जबकै देखिन्थ्यो । तर, के मिडियामा यो देखाउन आवश्यक थियो ? पत्रकारको बाक्लो उपस्थिति रहेको घोषणा सभामा प्रदीप खड्का र नव-नायिकालाई कसरि असुरक्षित महशुस भयो ? यो प्रश्न निर्देशक मिलन चाम्समाथि पत्रकारको तेर्सियो । उनले भने, 'कलाकारलाई हाम्रो सम्मान हो । त्यो सम्मान त्यतिक्कै पाएको होइन । के प्रदीपले सक्दैन होला ४ जना बडिगार्ड लिएर हिँड्न ? नव-नायिकालाई जसरि हामीले बडिगार्डसहित प्रवेश गरायौँ त्यो भनेको हाम्रो नेपाली फिल्म क्षेत्रमा कति सम्मान छ भनेर देखाउनका लागि पनि हो र यसले अनुशासनमा बस्नु पर्छ भनेर पनि सिकाउँछ ।'
'प्रेमगीत' र 'प्रेमगीत २' पछि प्रदीपको लोकप्रियताले बडिगार्डको खाँचो देखाउँछ तर पत्रकार सम्मेलनमा यो शोअप अलि अपाच्य पो भयो कि ? कलाकारसँग बडिगार्ड कुन ठाउँमा देखाउने सायद निर्माण पक्षलाई पत्तो भएन जस्तो छ । आशा गरौ, पत्रकार सम्मेलनमा बडिगार्डसँग सुरक्षित महशुस गरेका प्रदीपलाई भोलीका दिनमा पनि सुरक्षा घेरामा देख्न सकिनेछ ।